माओबादी पृष्ठभूमिका परियारलाई प्रदेश प्रमुखबाट हटाएपछि बादल र टोपबहादुर पनि आश्चर्यमा ! - Kantipath.com
माओबादी पृष्ठभूमिका परियारलाई प्रदेश प्रमुखबाट हटाएपछि बादल र टोपबहादुर पनि आश्चर्यमा !
सरकारले प्रदेश २ प्रदेशका प्रदेश प्रमुख तिलक परियारलाई बर्खास्त गरेर नयाँ प्रदेश प्रमुखमा राजेश झालाई नियुक्त गरेको छ। शुक्रबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख परियारलाई हटाएर नयाँ प्रदेश प्रमुखमा झालाई नियुक्त गरेको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले परियारलाई हटाएर प्रचण्ड–नेपाल समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई सन्देश दिन खोजेको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ। पूर्व माओवादीका नेतासमेत रहेका परियार प्रचण्ड नेकपाको कार्यकारी हुँदा उनैको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख नियुक्त भएका हुन्।
नेकपामा आएको विभाजनसँगै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्डपक्षीय प्रदेश प्रमुख परियारलाई हटाएर सन्देश दिन खोजेको बालुवाटार स्रोतको दावी छ। माओबादीको कोटाबाट प्रदेश प्रमुख बनेका परियारलाई सरकारले हटाएपछि पुर्व माओबादी पृष्ठभुमिका मन्त्री गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, टोपबहादुर रायमाझी, मणि थापाहरु पनि आश्चर्यमा परेको उनीहरु निकट स्रोतले बतायो ।
तिलक परियार नेपालको प्रदेश २ का प्रदेश प्रमुखमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २०७६ कात्तिक १८ गते नियुक्त गरेकी थिईन । तत्कालीन एकीकृत नेकपा माओवादीको तर्फबाट प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत बाँके १बाट विजयी संविधानसभा सदस्य तिलक परियार ‘हिम्मत’ रोल्पा लिबाङमा जन्मेका हुन् । परियार माओवादीनिकट दलित मुक्तिमोर्चाका केन्द्रीय अध्यक्ष तथा माओवादीका केन्द्रीय सल्लाहकारसमेत थिए ।
स्नातक तहसम्मको औपचारिक अध्ययन गरेका परियारले लामो समय भारतमा बसेर पनि पार्टीको काम गरे । भारतबाट नेपाल आएपछि बाँकेमै बसाइ सराइ गरेका परियार जनयुद्धको बेला बाँके वरपर नै खटेका थिए । २०२८ सालदेखि राजनीतिमा लागेका परियार विपन्न दलित परिवारमा जन्मेका थिए । फुर्सदको बेला लेखन र अध्ययनमै बिताउन चाहने परियार माओवादीका पुराना नेतामा राम्रो भाषण गर्नेमध्येमा गनिन्छन् । परियार अन्तरिम व्यवस्थापिकाको सदस्य समेत थिए ।
Previous Previous post: भोली अनेरास्ववियूका पुर्व अध्यक्ष डाचाराज वाग्लेको स्मृतिमा श्रद्धान्जली सभा
Next Next post: पिएको रेलका हाकिमसँग चर्काचर्की हुँदा प्रदेश प्रमुख पदमुक्त